Saint Jude laba -one CZ Pendant 14K - Popular Jewelry
Saint Jude laba -one CZ Pendant 14K
Laba Tone (Jaale / Cadaan) Color:
Laba Tone (Jaale / Caddaan) - $ 1,323.59 Kala duwanaanta:
Birta qaaliga ah: 14 Dahab Karat oo dahab cad leh
Cabirrada la heli karo: Dhererka: 88 mm
Miisaaniyada la Heli Karo: ~ 19.90 garaam *
Goobta: Tray P
Waxaa lagu heli karaa cabirro kale. Fadlan weydii.
* Miisaannada oo dhami waa qiyaas.
** Qoorta ayaa gooni loo iibiyay.
Fadlan nala soo xiriir haddii aad hayso su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan cabbirro kale ama qaabab, helitaan, tilmaam, iyo xulashooyinka shaqsiyeed. si aad u sii weydiiso ama u iibsato sheyga.
Kooxda ciyaarta popular jewelry kor iyo dhaafba la aaday shaqadii caadada ahayd ee loo sameeyay suunka. Cusboonaysiinta toddobaadlaha ah ayaa la bixin jiray inta shaqadu socoto. Adeegga macaamilku aad buu u fiicnaa. Natiijadii ugu dambaysay waxay ahayd mid layaableh.